> Resource > Ladnaansho > ASUS Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop ASUS
U baahan tahay caawimaad si ay u soo ceshano Xogta laga Laptop ASUS
Yester caruurta aan wax yar laga saaro qaar ka mid ah fayl ka qor ASUS. Nasiib ayaan lahaa qaar ka mid ah waraaqaha xafiiska ganacsiga, sawirada ii ambabbixisaan London iyo qaar ka mid ah files kale ee galalka kuwan. Hadda waxaan u baahan tahay in la helo hab si aad u hesho dib. Qof i caawin kartaa fadlan?
Haddii aad nasiib ku filan, oo aad iyaga u soo ceshano karaa bin Recycle ku saabsan laptop ASUS. Haddii kale waxaad u baahan tahay barnaamijka soo kabashada xogta ASUS si ay kuu caawiyaan.
Halkan waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad u. Version Windows ee Wondershare Data Recovery awood u kabsaday faylasha sida sawiro, videos, document files, emails, files audio iyo ka badan oo ka laptop ASUS, ma files arrinta ku saabsan buug ASUS lumeen ay sabab u tahay tirtirka shil ah, formatting, Baadi nidaamka ama xataa shil. Waxaa hadda si buuxda u la jaan qaada laptop ASUS in waddaa Windows XP, Windows 7 ama Windows 8.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah si ay u bilaabaan ASUS kabashada xogta laptop in tallaabooyin fudud oo ammaan yar. Version maxkamad Tani waa ay awoodaan in ay baarista drive adag buug ASUS ama xijaab intaadan gadan nooca buuxda, si aad u hubiso in qalab waa mid aad waxtar leh ama ma samayn karaan.
Qabtaan ASUS Laptop Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Dooro 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery aad laptop ASUS, waxaa lagu siin doonaa 3 hababka soo kabashada. Waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahin ka mid ah 3 hababka dooro midka ugu haboon in ay sii wadaan.
Bal aan marka hore isku day "lumay Recovery File" wada.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo qalab ku ASUS drive adag in faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan qor ASUS drive adag ama xijaab
In tallaabadaas, qoruhu aad laptop ASUS si toos ah tirtirayaa oo soo bandhigay by barnaamijka. Waxaad dooran kartaa Risaalo in faylasha aad ayaa laga badiyay ka oo ka dhacay on "Start" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka for files lumay.
Fiiro Gaar ah: Wixii iskaanka ee files in ay ahaayeen formatted, fadlan dooro "Enable Deep Scan" furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka laptop ASUS
Marka scan ay ka badan tahay, waxyaabaha uu ka helay on your ASUS qor drive adag lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama "Jidka" furmo.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan faylasha aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" in ay doortaan gal ah ku saabsan laptop ASUS si ay u sii.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo xogta soo kabsaday in ay xijaab asalka ah ee aad qor ASUS.